Izithombe Zasendlezi Wabasaqalayo - uLucidPix
Abaningi bethu bafuna izinto ezizokwenziwa ngenkathi sibhekene naleli gciwane, futhi lokhu kuholele abantu abaningi ekuthatheni ubuhle bemvelo. Kunabantu abaningi abajoyina umhlaba wezangaphandle ezinkulu, bafuna indlela yokubalekela isithukuthezi sekhaya ngaphandle kokusondelana nabanye. Okulandelayo yindlela engcono kakhulu yokubamba izithombe zasendle zabaqalayo.
Ikhamera kanye Nezithombe
Omunye wemibuzo enkulu ebuzwa abantu masisha ukuthi yiziphi izilungiselelo ikhamera yami okufanele ibe kuzo ukuze ibambe kahle isilwane. Lokhu konke kuya ngekhamera yakho.
Ama-Smartphones, kufaka phakathi iningi i-iPhones nezinguqulo ze-Android, athumela ngamakhamera anekhono kakhulu, ane-limited limited. Isibonelo, usayizi wazo omncane wezinzwa kusho ukuthi kunokukhanya okuncane okuqoqiwe ngokuthinta ngakunye kwenkinobho ye-shutter. Lokhu akuyona inkinga ekukhanyeni okukhanyayo nangaphandle, kepha uma uzama ukudubula emakamelweni amnyama noma ebusuku, la makhamera ajwayele ukuzabalaza, okuholela ekufiphaliseni, ezithombeni ezigqamile.
Ngokufanayo, umjaho wokwakha ifoni ye-thinnest kusho ukuthi ayikho indawo yezindlela eziyinkimbinkimbi zoom. Abenzi basebenzise okuthile ngandlela thile kufaka phakathi amalensi amaningi, ezinye ezinama-engela obanzi kanti ezinye zinama-zooms, kepha lezi zinhlelo zisalokhu zishoda ngelensi yangempela yokusondeza ku Ikhamera ye-DSLR. Ngenxa yalokhu, zama ukungasondezi kakhulu, njengoba uqhubeka nale ngozi yokunciphisa imininingwane futhi ufiphaze isithombe sakho.
Futhi kubalulekile ukwenza isiqiniseko sokuthi wena thepha esikrinini Ukukhetha iphuzu lokugxila kulo esithombeni sakho. Ngale ndlela ungaqinisekisa ukuthi isilwane sigxile kakhulu, hhayi into esemuva. Zama ukugxila esweni lesilwane ukuze uthole isithombe esithandekayo.
Kwezinye izimo ungafuna ukusebenzisa i-flash yakho ukufaka ukukhanya okuthile endaweni yesehlakalo. Vele ukhumbule lokho i-flash yakho ngeke isebenze ngokudlule amamitha ambalwa kusuka kukhamera. Akunamandla kangako. Kufanele futhi ucabange ukuthi lapho kungasiphazamisi khona isilwane esifundwayo, ngoba ukusebenzisa i-flash kugijimisa ubungozi bokweqa isilwane.
Kukhona futhi ngokuvamile a Ukukhetha okuhle kwezihlungi lokho kungaletha ithoni ehlukile esithombeni sakho. Ungashintsha isithombe sakho sibe simnyama nesimhlophe ukuze ulethe isimo esiqonde ngokwengeziwe ngomfanekiso, noma usikhanyise ngesihlungi ukuletha injabulo ethile kanye nobuhle bemvelo.
Ama-angles nama-Views angcono kakhulu weZilwane zasendle
Enye into esemqoka yokuthwebula izithombe zasendle ukuqinisekisa ukuthi uthwebula umzuzu kusuka ekhoneni elifanele. Kwesinye isikhathi uma sithatha isithombe, siyakhohlwa ukuthi sikuphi nokuthi lokho kubaluleke kanjani kumfanekiso wokugcina. Kubalulekile ukufaka isihloko esimweni esingokwemvelo, ukusisondeza engokoqobo yombukeli.
Isibonelo, uma isilwane sichitha iningi lempilo yaso emhlabathini ngaphansi kwezihlahla, bese uzama ukuqiniseka ukuthi uyakubonisa lokho. Uma kunezinhlobo ezigxuma esihlahleni ziye kwesinye, bekungeke yini kube kuhle ukubakhombisa lapho begxuma noma nje emaphethelweni egatsha, balayishe ngokugxuma kwabo okulandelayo?
Kubalulekile futhi ukudonsa ikhanda lesilwane esithombeni. Akudingeki kube yisihloko esikhulu, kepha ukufaka ikhanda esithombeni sakho kusiza umuntu ukuba enze isilwane, okwenza isithombe sithande kakhulu isibukeli. Ukuthwebula iso lesilwane kukusiza ukubamba ukunaka kwezilaleli.
Thumela Iyacubungula Izithombe Zezilwane
Ngisho nezithombe ezinhle kakhulu zithumela inqubo yazo. Akuvamile ukuthi sihlangane nezimo ezifanele ukwenza isithombe esihle sikhulu. Ngamathuluzi wokuhlela wesithombe anamandla anamhlanje, kaningi singenza izinguquko ezincane ezenza umehluko omkhulu.
ULucid ungomunye wabaqambi abahamba phambili kubuchwepheshe be-3D obuqhutshwa ubuhlakani. Uhlelo lokusebenza lukaLucid, I-LucidPix, inika abadali indlela elula yokwenza izithombe ze-3D futhi wabelane ngayo kunoma iyiphi ipulatifomu yezokuxhumana. Kuyatholakala mahhala kuzo zombili izinkundla ze-iOS ne-Android, inqubo eyodwa kaLucidPix eshintsha noma isiphi isithombe esijwayelekile ibe ezihamba phambili wobuciko be-3D. Ungaguqula isithombe sakho se-3D esiguquliwe manje ividiyo noma i-GIF usebenzisa uhlelo lokusebenza lweLucidPix, unikeza nokuphila okuningi kakhulu esithombeni sakho esimangazayo, njengokungathi ubuyile kuleyo ndawo ubukele leso silwane sihamba endle.
Manje usukulungele ukuya endle futhi ujoyine abanye abaningi abazama ukuhamba isikhashana. Unamathuluzi nolwazi lokwenza uhambo lwakho nokufika kwakho, okumangazayo kakhulu kunanini ngaphambili ngekhono lakho elisha lokufunda izithombe zasendle.
Izibonelo eziyi-10 Zobuhlakani Bokuhlobisa Ezimpilweni Zethu Zansuku zonke →← Ungawenza Kanjani Ama-GIF Wabantu Ngezinyathelo Ezi-3 ezilula